Seranam-piaramanidina Okrainiana: miresaka momba ny mpisolovava amin'ny hetsika eTurboNews
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Seranam-piaramanidina Okrainiana: miresaka momba ny mpisolovava amin'ny hetsika eTurboNews
Ny fitoriana an-tsokosoko an'i Okraina Airlines sy ny hafa dia momba ny toe-javatra napetraka tany Canada taorian'ny mpandeha 176 novonoina tao amin'ny PF752 tany Iran. Iza no tompon'andraikitra? Iza no tsy maintsy mandoa?
The Governemanta Iraniana, Ukraine International Airlines, Airline Austrians, Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar Airways, Aeroflot, ary / na ny Governemanta amerikana. Ny tambin-karama ho an'ny fianakavian'ireo mpandeha fiaramanidina dia azo trosaina.
Andriamatoa Tom Arndt at Orinasa mpisolovava Himelfarb Proszanski tany Toronto, Canada, niresaka eTurboNewMpamoaka anarana Juergen Steinmetz androany. Andriamatoa Arndt dia iray amin'ireo mpisolovava amin'ny fanenjehana ny kilasy kanadianina natao tany Toronto ho an'ireo niharam-boina tamin'ny sidina Okrainiana voatifitra tany Tehran, Iran.
Andriamatoa Arndt dia namintina ireo olana teo am-pelatanana eTurboNews:
Ny sidina PS752 dia tsy tokony nidina. Ora 4 monja taorian'ny nandefasan'i Iran balafomanga tamin'ny toby amerikana tany Irak.
Vonona tanteraka i Iran amin'ny valifaty amerikana sy ny ady tanteraka.
Tokony nandrara ny sidina rehetra ny tompon'andraikitra amin'ny seranam-piaramanidina sy fiaramanidina.
Nalefanay ity hetsika kilasy ity mba hitondrana fahamarinana sy onitra amin'ireo fianakaviana tratran'ity loza mahatsiravina ity.
Manantena izahay fa i Iran sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Okrainiana dia hanonitra ireo fianakaviana noho ny fahavoazan'izy ireo. Tsy afaka mamerina ny mpandeha izahay raha irinay. Ireo anadahy, rahavavy, reny, zanakavavy, raim-pianakaviana, zanakalahy, zanak'anabaviny ary zana-drahalahin'izy ireo dia tsy hiverina. Ity fitoriana ity no azontsika atao hikatsahana ny rariny sy onitra noho ny fahavoazan'izy ireo.
Maniry ny hahatratra ny rariny sy ny onitra izahay amin'ny anaran'ny mpandeha sy ny fianakavian'izy ireo.
Nanaiky i Iran fa nitifitra ny fiaramanidina izy. Dingana voalohany matanjaka izany. Mbola tsy nandray ny andraikiny ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Okrainiana. Izahay dia mikasa ny hiasa amin'ny fitsarana mba hitady fahamarinana sy onitra ho an'ireo fianakaviana. Olona tsara sy salama maro manerantany no nanomboka ny fizotrany.
Eritrereto ny mety ho tao anatin'io fiaramanidina io. Voafafa avokoa.
Tsy afaka mamerina ireo tra-boina isika.
Ny azontsika atao dia ny mitondra fahamarinana sy onitra ho an'ny fianakaviany sy ny olon-tiany. Fotoana hanampiana anay izao. Izany no ahafahantsika manampy.
Hoy i Tom Arndt: "Hanaraka ny Governemanta Iraniana, ny Corps Guardian Revolutionary Guard, ary ny Okrainiana Iraisam-pirenena Airlines izahay amin'ity dingana ity amin'ny raharaham-pitsarana ataonay izay hatolotray hataonay eto Canada."
“Betsaka ny dokotera tanora, mpianatra mpitsabo manana nofinofy lehibe, ary fianakaviana no nanjavona tamin'ny 8 Janoary 2019, teny an-dalana avy any Iran nankany Ukraine sy Canada. Tsy momba ny vola izany, fa ny hampitsara ny fahamarinana amin'ireo fianakaviana voakasik'izany. ”
Himelfarb Proszanski dia orinasan-dalàna any afovoan-tanàna any Toronto ary mifantoka amin'ny fanampiana ny mpanjifa hiatrika olana lehibe. Niorina tamin'ny taona 1998 avy amin'i Peter Proszanski sy David Himelfarb, ny orinasa dia mifantoka amin'ny faritra maro amin'ny lalàna ao anatin'izany ny orinasa, ny varotra, ny franchise, ny raharaham-barotra, ny merger ary ny fividianana, ny lalàna momba ny fiantohana, ny trano sy ny fiantohana.
Hoy Andriamatoa Arndt: “Ny sidina Ukraine Airlines PS752 dia niainga avy tao amin'ny seranam-piara-manidina Teheran tamin'ny 8 Janoary lasa teny Kiev. Nanaraka ny làlan'ny sidina efa niorenany mialoha ny fiaramanidina. Ity lalana ity dia nahatonga azy ireo hiatrika fametrahana miaramila mafampana. ”
Anisan'ireo maty ny mpandeha 138 niverina tany Kanada, nahitana teratany kanadiana 57. ary ny olom-pirenena tsy kanadiana amin'ity fiaramanidina ity dia nisaina ho an'ny mpianatra, ny dokotera ary ny mpandehandeha mpanao raharaham-barotra hiverina any Canada.
Iran niaiky farany fa ny rafitra fiarovan'ny balafomanga dia nitifitra ilay fiaramanidina taorian'ny fiampangana fahadisoana ara-teknika na mekanika tamin'ny voalohany. Filoham-pirenena Iraniana Hassan Rouhani nanambara fa "hadisoana tsy azo avela io."
Tom Arndt niaiky ny eTurboNews io no dingana tsara indrindra niainan'i Iran ny hadisoan'izy ireo, ary tonga izao ny fotoana hanatonan'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Okraina fa diso ny famelana ny sidina hiaingan'izy ireo.
Praiminisitra Kanadiana Justin Trudeau Hoy izy: “Mampihoron-koditra ny fitifirana fiaramanidina sivily… Iran dia tokony handray andraikitra feno… Manantena izahay Iran hanonerana ireo fianakaviana ireo. ” Nilaza izany ny tompon'andraikitra ao Okraina Iran tokony hanonitra ny fianakavian'ireo niharam-boina.
Tamin'ny fotoana nitrangan'ny fianjerana, ny US Federal Aviation Administration dia nandrara ny sidina sivily tsy hisidina ambonin'ny faritra. Taorinan'ny fianjeran'ny zotram-piaramanidina Malaysian Airlines 17 tamin'ny 2014, maro ireo orinasam-pitaterana no manaja ny fanamarihana FAA rehefa mandray fanapahan-kevitra fiarovana. Seranam-piaramanidina maromaro, ao anatin'izany ny Air France, Air India, Singapore Airlines, ary KLM, no namerina ny sidina. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa toa an'i Emirates sy Flydubai dia nanafoana ny sidina rehetra mankany Iran.
eTurboNews tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia nanipika fa tokony hizara ny Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Qatar Airways, ary Aeroflot responsibilitéMiaraka amin'i Ukraine International Airlines sy ny governemanta Iraniana ary tompon'andraikitra amin'ity tranga mahatsiravina ity.
eTN nanipika tao amin'ny lahatsoratra: Ukraine International Airlines dia mety nanara-dia ny ohatr'ireo mpitatitra iraisam-pirenena hafa toa ny Lufthansa, Austrian Airlines, Aeroflot, Qatar Airways, ary ny Turkish Airlines izay tsy niraharaha ny fampitandremana FAA ary nanohy ny asany na dia teo aza ny fampitandremana mazava sy tsy azo diso. FAA. Ny Austrian Airlines, Qatar Airways, ary Aeroflot aza dia niasa iray andro taorian'ny fianjerana nahafaty.
eTurboNews dia nanontany ny antony nanohy ny sidina ny zotram-piaramanidina ary nitanisa ny angon-drakitra momba ny sidina ampiasain'ny mpitatitra ara-barotra na eo aza ny loza mitatao.
Raha nanontanian'i eTurboNews raha toa ka azo hitarina amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa ity hetsika ity, hoy Atoa Arndt, "Mbola eo amin'ny dingana voalohany izahay ary mikaroka ny làlana rehetra hahazoana ny rariny amin'ireo fianakaviana voakasik'izany."
eTurboNews nanontany hoe iza no handoa ilay fitoriana. Namaly Andriamatoa Arndt hoe: “Tsy misy vidiny mihoampampana ho an'ireo fianakaviana. Nanampy izy New YorkNy orinasa mpamatsy vola any ifotony, Galactic Litigation Partners LLC, dia nanaiky, nifanaraka tamin'ny fankatoavan'ny fitsarana, mba hamatsy ara-bola ny hetsika natao hamelezana ny governemanta Iraniana sy ny Ukraine International Airlines. ”
Hanaraka ny governemanta amerikana ve ianao hanomboka ny fihetsiky ny hetsika? Nanontany i eTN. Tom Arndt's Ny valiny dia hoe: "Amin'izao fotoana izao dia tsy mikasa ny hampiditra ny governemanta amerikana amin'ny raharaham-pitsarana izahay."
Fanamby Sheraton Park Hotel Anaheim: Nandray an-tanana ny Taconic Capital